မြန်မာပြည်မြောက်ဖျားပိုင်းမှ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ (စီစီပီ) သို့ စာ နှစ်စောင် | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သုံးသပ်ချက်များ သတင်းသုံးသပ်ချက် မြန်မာပြည်မြောက်ဖျားပိုင်းမှ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ (စီစီပီ) သို့ စာ နှစ်စောင်
ဒီနေ့ သတင်းသုံးသပ်ချက် [LIVE] ထုတ်လွှင့်မှုတွင် “တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များနှင့် တရုတ်နိုင်ငံ : မြန်မာနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းမှ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ (စီစီပီ) သို့ စာ နှစ်စောင်” EAOs & China: Two Letters from Northern Myanmar to the CCP ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ သုံးသပ်ချက်ဆောင်းပါးကို တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။
“တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်များနှင့် တရုတ်နိုင်ငံ : မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှ တရုတ် ကွန်မြူနစ်ပါတီ (စီစီပီ) သို့ စာနှစ်စောင်” (EAOs & China: Two Letters from Northern Myanmar to the CCP) ခေါင်းစဉ်အမည်ဖြင့် New Mandala ဝက်ဘ်ဆိုက်မှ ဇူလိုင်လ (၂၈) ရက်နေ့တွင် ဖော်ပြလာခြင်း ဖြစ်သည်။
New Mandala ဝက်ဘ်ဆိုက်သည် သြစတေးလျ အမျိုးသားတက္ကသိုလ် (ANU) ၏ အာရှပစိဖိတ်ရေးရာ လေ့လာရေး “ကော်နယ် ဘဲလ်စကူး” ၏ အရှေ့ တောင်အာရှ လေ့လာမှုဆိုင်ရာ စာတမ်းများနှင့် သုံးသပ်ချက် ဆောင်းပါးများအား ဖော်ပြနေသည့် ဒီဂျစ်တယ်အခြေပြု ပညာရပ်ဆိုင်ရာ သုတေသနနယ်ပယ် တစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး အာဏာရပါတီဖြစ်သော တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ (CCP) ၏ ပါတီ ထူထောင် ခြင်း နှစ် (၁၀၀) ပြည့် နှစ်ပတ်လည်နေ့အား ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့တွင် တီယန်မင် ရင်ပြင်၌ ကျင်းပခဲ့သည်။
ပြည်တွင်း၌ ကျင်းပသည့် ဂုဏ်ပြုအခမ်းအနားများ အပြင်၊ (CCP) သည် ကမ္ဘာအနှံ့ရှိ နိုင်ငံ ရေးပါတီများနှင့် နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းများမှပေးပို့သည့် ဂုဏ်ပြုသဝဏ်လွှာပေါင်း ၁၅၀၀ ကျော်ကိုလည်း လက်ခံရရှိခဲ့သည်။
ထိုစာများအတွင်း၌ မြန်မာနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းရှိ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်း (EAOs) များမှ ပေးပို့လိုက်သည့် သဝဏ်လွှာ (၂) စောင်လည်း ပါဝင်နေသည်။ မည်သည့် အဖွဲ့များမှ မည်သည့်အကြောင်းအရာများအား ပေးပို့ ထားကြပါသနည်း။ ?
ပထမ သဝဏ်လွှာအား ပလောင်ပြည်နယ် လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး၊ တအောင်း အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် (PSLF/TNLA) ၊ မြန်မာနိုင်ငံ အမှန်တရားနှင့် တရားမျှ တသောအမျိုးသားပါတီ၊ မြန်မာအမျိုးသား ဒီမိုကရက်တစ် မဟာမိတ်တပ်မတော် (MNTJP/ MNDAA) (ကိုးကန့်) နှင့် ရက္ခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်၊ ရက္ခိုင့်တပ်တော် (ULA/ AA) စသည့် EAOs (၃) ဖွဲ့ ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားသည့် “ညီနောင်မဟာမိတ်” (၃) ဖွဲ့မှ ပေးပို့ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ဒုတိယ သဝဏ်လွှာအား တရုတ်နှင့် ထိုင်းနယ်စပ်တစ်လျှောက် နယ်မြေကို ထိန်းချုပ်ထား သည့် တိုင်းရင်းသား EAOs များတွင် အင်အား အတောင့်တင်းဆုံး ဖြစ်သည့် “ဝ” ပြည် သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီနှင့် တပ်မတော် (UWSP/UWSA) မှ ပေးပို့ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
■ Direct Contributions can be made by membership in Youtube Channel.
တစ်လ ၁ ဒေါ်လာနှုန်းဖြင့် Channel Member ပြုလုပ်ကာ ကိုယ်လိုလားတဲ့ “ပြည်ထောင်စု” ကို MCN TV NEWS နှင့်အတူ ကိုယ်တိုင် ပြုစုပျိုးထောင်ကြပါစို့.. (Link အားနှိပ်ပါ)
တစ်လ ၁ ဒေါ်လာနှုန်းဖြင့် Channel Member ပြုလုပ်ကာ ကိုယ်လိုလားတဲ့ “ပြည်ထောင်စု” ကို MCN TV NEWS နှင့်အတူ ကိုယ်တိုင် ပြုစုပျိုးထောင်ကြပါစို့.. (Link အားနှိပ်ပါ) https://www.youtube.com/channel/UC5pysxVjItmj8EYwH0saAig/join
Previous articleကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး၊ ကရင်အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် (KNU / KNLA) ၏ စစ်အာဏာသိမ်းမှုအပေါ် တုံ့ပြန်မှု
Next articleMCN TV NEWS’S ACADEMY